. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အိပ်မက်ရာသီ
ဒီလို ရာသီမျိုးပါပဲ ..
နှင်းတွေ ရှိမယ် .. အေးမြစွတ်စိုတဲ့ မနက်ခင်းတွေ ရှိမယ် .. ညနေခင်းတွေ နေ၀င်စောမယ် .. နှင်းထုက အမှောင်ထုကို အဖော်ပြုမယ် .. မြူတွေဆိုင်းတဲ့ မနက်နဲ့ ညနေခင်းတွေ ရှိမယ် .. ညနေဘက်ဆို ကလေးတွေရဲ့ စီစီညံညံသံတွေ ကြားရမယ် .. မနက်ခင်းတွေမှာ စောစော အိပ်လို့ စောစောထလို့ စောစောလမ်းလျှောက်ကြဖို့ သတိတွေ ပေးနေကြမယ် .. ဒီလို အချိန်ရာသီမျိုးပါပဲ .. ကျမရဲ့ အိပ်မက်တွေက အခန်းတံခါးကို ဖြည်းဖြည်း ညင်သာ တိုးဝင်လာလေ့ ရှိတယ် ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ် .. ဒီလို အချိန်မျိုးကစလို့ ကျမ အိပ်မက်တွေ မက်တတ်လာခဲ့တယ် .. ညနေခင်း မြူတွေအောက် ကန်ဘောင်နံဘေးမှာ စကားတွေ တီးတိုးပြော ရှေ့ရေးတွေ တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ် .. အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖော်မယ်လို့ စိတ်ကူးညနေခင်းတွေ ရောင်ခြည် ဖြာနေခဲ့တယ် ..
မနက်ဖက်ဆို တယောက် အမော တယောက် မျှယူလို့ နှင်းစိုစိုထဲ လက်တွဲ မြဲခဲ့ဘူးတယ် .. ပါးစပ်ထဲက အငွေ့တွေ ထွက်အောင်လုပ်ပြီး အကြောင်း မရှိ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးသလို နှာသီးဖျား နားရွက်ဖျားလေးတွေ အေးနေတာကို တို့ထိ ဆော့ကစားပြီး ပြေးလွှား အော်ဟစ်ခဲ့ဘူးတယ် .. ဒီလိုနဲ့ ကျမ အိပ်မက်ရာသီတွေ အလေ့ကျ ပေါက်ရောက်လာခဲ့ရတယ် ..
ခွန်အားတွေ ပေးခဲ့တယ် ..။
ကျမကို ဆိုးတယ်တဲ့ .. နင်သိပ်ဆိုးတယ်လို့ သူက ပြောလေ့ရှိတယ် .. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး .. ကျမက လူရွေးပြီး ဆိုးပါတယ် .. အထူးသဖြင့် ကျမ ချစ်ခင်ရတဲ့ ကျမကို ချစ်တဲ့သူတွေ အပေါ်တွင်မှပါ .. ပြီးတော့ ကျမက မလိမ္မာလို့ ဆိုးတာလည်း မဟုတ်ပြန်ပါ .. လိမ္မာပြီး ဆိုးတာ .. ပြောရမယ်ဆို ချစ်စနိုးနဲ့ ဆိုးတတ်တဲ့ ကျမပါ ..
ကျမ ဂျစ်တိုက်တဲ့အခါ စိတ်မရှည်ပဲ တခါတလေ အော်ထုတ်လေ့ရှိတယ်လေ .. အကယ်၍ ကျမ မျက်နှာညိုသွားတဲ့အခါ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် မချော့တတ် ချော့တတ်နဲ့ စကားတွေ လျှောက်ပြောလိမ့်မယ် .. အဲ .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ..
သံယောဇဉ်တွေ တိုးခဲ့တယ် ..။
ညီမလေး .. နင် လိမ္မာပါတယ်ဟာ .. ဒီစကားတခွန်းပဲ နောက်ဆုံး ရခဲ့တယ် .. အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဘ၀ရဲ့ ရှေ့ရေးတဲ့ .. ကောင်းပါပြီလေ .. ယုံကြည်စွာနဲ့ လက်သင့်ခံလိုက်ပါ့မယ် .. တခြားရွေးစရာလမ်းလည်း ရှိမှ မရှိခဲ့ပဲ ..
အဲဒီနေ့က မျက်ဝန်းတွေ စိုခဲ့လား .. သတိမထားလိုက်မိဘူး ..
အဲဒီနေ့က ကတိတွေ အထပ်ထပ်တောင်းခဲ့လား ..ေ၀၀ါးနေခဲ့တယ် ..
အဲဒီနေ့က ငါတို့ နောက် ၄နှစ်ဆို ပြန်တွေ့ကြမယ် .. နင်ပြောခဲ့သလား .. အဲဒီအချိန် ငါ့ မှတ်ဥာဏ်တွေ နည်းနေခဲ့တယ် .. သေချာတာတခုက ငါ့မျက်နှာ ညို မညို ဂရုမစိုက် မျက်နှာလွှဲခဲ့တယ် ..
တကယ်ပဲ လိမ္မာချင်ခဲ့တဲ့သူ ..။
ဆန္ဒတွေကို သိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့သူ ..။
တကယ် ပြန်ရောက်လာလိမ့်မလား ..
မြူတွေ တိမ်တွေ ပြန်လည်စုဝေးတဲ့ အခါ ..
အိမ်မက်ရာသီ တကျော့ပြန်လည်ခဲ့တဲ့အခါ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/08/2011 02:47:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ကဗျာ ထင်တယ်, အက်ဆေး
ကျမနှင့် အလုပ် (၂)